Akkasuumas, xiyya BarruuUfmaa saajootti Saagi irra cuqaasitii, kana booda, BarruuUfmaa issa saaguuf barbaaddu filadhu.
Gulaali - BarruuUfmaa filadhu
Kamshaa saaguu irratti,
Qaaqni kun BarruuUfmaaAkaakuuf galfatoota BarruuUfmaa tarreessa.
Yaddachiisan agarsiissaa maqaa, yammuu barreessiitu akka yaddaati
Akka galfata BarruuUfmaan walfakkaatu qubee sadii barreessiiteen yaadiyyaa Qaccee Gargaarsaa jecha guutuu godhee si agarsiisa. Yaadiyyaa fudhachuuf, Saagi dhiibi. Yoo galfatii BarruuUfmaa qubeen tokko ol kan walfakkaatu tahe, galfatoota fudhachuuf, Ctrl+Tab dhiibi. Fakkeenyaaf, barruu ilaallata saaguu yoo barbaade, "Ilaal" barreessiitii, kana booda Saagi dhiibi.
Maqaa galfata BarruuUfmaa ammaa filataamanii tarreesa. Yoo galmee keessaa barruu filattee, qabduu BarruuUfmaa cuqaasitii, kana booda Haaraafiladhu.
Qaxxaamura galfata BarruuUfmaa filataamaniif agarsiisa. Yoo galfata BarruuUfmaa haaraa uumaa jirta tahe, galfataaf qaxxaamura fayyadamuu barbaaddu barreessi.
Akaakuuwwan BarruuUfmaa tarreesa. Akaakuu keessaa galiinsa BarruuUfmaa Mul'isuuf, Akaakuu irra yk fuuldura Akaakuutii mallattoo idaatii (+) lama cuqaasi. Galmee ammaa keessatti galfata BarruuUfmaa saaguuf, tarree keessaa galfata filadhuutii, kana booda, Saagi irra cuqaasi.
Galfatoota BarruuUfmaa tarree tokkoo irraa gara taree birraatti harkistee kaa'u ni dandesa.
BarruuUfmaa filatame gallimee ammaatti galcha.
Kewwattaa keessatti galfata BarruuUfmaa hin dhangi'amne yoo saagde, galfatii haalataa kewwattaa ammaatiin dhangi'ama.
Ajajoota BarruuUfmaa dabalataa agarsiisuuf, fakkeenyaaf, filaannoo barruu galmee ammaa keessatti galfata BarruuUfmaa haaraa uumuuf cuqaasi.
Filannoo atti galmee ammaa keessatti goote irraa galfata BarruuUfmaa haaraa uuma. Galfatii kuniis Akaakuu BarruuUfmaa amma filatamaan irraatti ida'aama. Ajaja kana arguu kee dura, maqaa saagi.
Haaraa (barru qofaaf)
BarruuUfmaa filatame gabatee muraatti garagalcha.
Qabeentaa galfata BarruuUfmaa filatamee, galmee ammaa keessatti filaannoo ta'een bakkabuusa.
Qaaqa, BarruuUfmaa Maqaa Jijjiiri iddoo galfata BarruuUfmaa filatameef maqaa itti jijjiiruu dandeessu bana.
Galmee addaa keessatti galfata BarruuUfmaa filatamee gulaaluuf bana, akkasumaas, jijjirami akka ta'uu barabaaduuf, Faayilii - BarruuUfmaa Olkaa'i filadhuutii, kana booda, Faayilii - Cufifiladhu.
Qaaqa, Maakroo Rammadii iddoo galfata BarruuUfmaa filatameetti maakroo itti milteesituu bana.
Galfatoota BarruUfmaa isa ati uumte keessatti, maakroowwan warra galfatoota BarruUfmaa kenname wal qabatan fayyadamuu dandeessa. Galfatoota BarruUfmaa kan uumamuu, dirqala "barruu qofa" qofa. Fakkeenyaaf, galfata BarruUfmaa keessatti <field:company> diraa saagitii, kana booda diraa LibreOffice qabeentota dirree kuusdeetaa wal fakkaataniin bakka buusa.
Qaaqa iddoo galfata Barruu Ufmaa alaaguu barbaaddu of keessaa qabu Maykirosoft 97/2000/XP Woordii yk qajojii filachuu dandeesu siif bana.
Akaakuuwwan BarruuUfmaa Ida'aa, maqaa jijjiira, yk BarruuUfmaaor haqa.
Maqaa Akaakuu Barruu Ufmaa filatame agarsiisa. Maqaa Akaakuu jijjiiruuf, maqaa haaraa barreessiitti Maqaa Jijjiiriirra cuqaasi. Maqaa haaraa uummuf, maqaa barreessiitii Haaraairra cuqaasi.
Xurree ammaa isa galeeloo faayiloonni Akaakuu Barruu Ufmaa keessatti kuufamanii agarsiisa. Yoo Akaakuu Barruu Ufmaa tokko uumuu feete, Akaakuu faayiloota kanaa bakka itti kuusuu barbaaddu filadhu.
Akaakuu Barruu Ufmaa haaraa sanduuqa keessaa Maqaakeessa galfate fayyadamuun.
Maqaa Akaakuu BarruuUfmaa filataamee keessaa, gara Maqaa sanduuqa galfatatti jijjiira.
Akaakuuwwan BarruuUfmaa jirraaf xurreewwan walgittaan tarreessa.
Qaaqa kanaGulaalii Xurree akka BarruuUfmaa kuufachuuf galeeloo filachuu dandeessu siif bana.
Galeeloo BarruuUfmaa tti xurree haaraa ida'uuf, qabduu Xurreeqaaqa BarruuUfmaa keessaa cuqaasi.
Geessituu walfakatan irraatti olkaa'i
Galeeloo BarruuUfmaatti geessituuwwan saagaa akka karraa LibreOffice siif qindeessuuf iddoo kana fayyadami.
Geessituuwwan gara galeeloo BarruuUfmaa kompitaroota kee irraa walfakkaatuu.
Geessituuwwan gara faayiloota interneetii irraa walfakkaatuu.
Title is: BarruuUfmaa